OpenSearch 1.0 inouya nerutsigiro rweARM64, kugadzirisa muwebhu interface uye nezvimwe | Kubva kuLinux
Mamwe mavhiki apfuura, Amazon yakazivisa kugadzirwa kwe inonzi yekutsvaga chikuva "OpenSearch" iyo fork kubva Elasticsearch 7.10.2 uye zviri pamutemo kodhi yekodhi yakacheneswa yezvinhu zvisina kugoverwa pasi peApache 2.0 rezinesi uye zvinhu zveelasticsearch brand zvakatsiviwa neOpenSearch.
Kune avo vasingazive neOpenSearch, iwe unofanirwa kuziva kuti izvi ichagadziridzwa seprojekti yekubatana yakagadzirirwa nekutora chikamu kwenharaunda. Izvo zvinozivikanwa kuti Amazon parizvino iri muchengeti weprojekiti, asi mune ramangwana, pamwe chete nenharaunda, zano rakanakisa richagadziriswa manejimendi, kuita sarudzo uye kudyidzana kwevatori vechikamu vanobatanidzwa mukusimudzira.
Iyo OpenSearch chirongwa chakaenderera mberi nekuvandudzwa kweiyo Open Distro kugoverwa kweElasticsearch, iyo yakambogadzirwa kuAmazon pamwe neExpedia Group neNetflix muchimiro cheElasticsearch plug-in. Iyo kodhi inogoverwa pasi peiyo Apache 2.0 rezinesi.
Nezve OpenSearch vhezheni 1.0
Amazon yakaratidza yekutanga vhezheni yeOpenSearch 1.0 chirongwa mairi isu tisingakwanise kuona chete iyo OpenSearch irikushanduka sebasa rekushandira pamwe munharaunda inotungamirwa, nemakambani akaita seRed Hat, SAP, Capital One, uye Logz.io vatove kujoina basa iri, asi iyi vhezheni 1.0 yatove yakanzi yakakodzera kushandiswa munzvimbo dzekugadzira.
Isu tinofara kugovana kuti chirongwa cheOpenSearch chakasvika padanho rakakosha nekuburitswa kweOpenSearch 1.0 Ichi chiitiko chakakosha chinoratidza yekutanga-kugadzirira vhezheni yeOpenSearch. Kuwedzera pakuve wakagadzirira kugadzirwa, zvinoverengeka zvitsva zvinowedzerwa zvakawedzerwa kune iyo projekiti: dhata kuyerera, kusefa kwekutevera-kumusoro ongororo makumbo, mushumo kuronga, uye nezvimwe.
Iyo itsva vhezheni yeOpenSearch 1.0 inosanganisira yekutsvaga uye yekuchengetedza Tsvagiridzo, iyo OpenSearch Dashboards web interface uye nharaunda yekuratidzira dhata, pamwe necheni yemapulagini akafanogadzirwa muiyo Open Distro chigadzirwa cheElasticsearch uye inotsiva izvo zvakabhadharwa zvikamu zveElasticsearch.
Semuenzaniso, Vhura Distro yeElasticsearch inopa plug-ins yekudzidza kwemuchina, SQL rutsigiro, chizvarwa chekudai, maseru mashandiro ekuongorora, traffic encryption, basa-based-access control (RBAC), Active Directory kuvimbiswa, Kerberos, SAML, uye OpenID. kusaina-kuendesa (SSO), uye kutemerwa zvakadzama kwekuongorora.
Pakati peimwe shanduko (pamusoro pekuchenesa kubva kune yekodhi kodhi, kusanganisa neOpen Distro yeElasticsearch uye kutsiva zvinhu zveiyo Elasticsearch brand neOpenSearch) tinogona kuona kuti mune iyi vhezheni nyowani yakagadzirirwa kugadzirisa shanduko kubva kuElasticsearch kuenda kuOpenSearch.
Pamusoro pezvo zvinoonekwawo kuti OpenSearch 1.0 inopa zvakakwana chiyero che API uye kufambisa aripo masisitimu kuOpenSearch kwakafanana nekukwiridzira kune imwe vhezheni yeElasticsearch.
Zvinotaridzawo kuti yakawedzerwa tsigiro yeARM64 yekuvakisa yeplatifomu yeLinux, mukuwedzera kune zvinongedzo zvezvikamu zvekuisa OpenSearch uye OpenSearch Dhibhodhi muzvigadzirwa zviripo nemasevhisi.
Iyo yewebhu interface yakawedzera rutsigiro rwekuyerera kwedata, iyo inokutendera kuti uchengetedze inoenderera ichisvika dhata yedhata muchimiro chenguva dzakateedzana (zvikamu zvenguva-yakasungwa paramende kukosha) mune dzakasiyana indexes, asi nekwaniso yekugadzirisa seyakaenzana (kureva mibvunzo nezita rekushandisa rakajairika).
Yakapihwa kugona kugadzirisa iyo yakasarudzika nhamba yeakanyanya shards kune iyo nyowani indekisi.
MuTrace Analytics, rutsigiro rwekupa uye kusefa hunhu hweSpan hwakawedzerwa.
Tsigiro yekuburitsa mishumo pane imwe purogiramu uye sefa mishumo nevashandisi.
Chekupedzisira, kune avo vanofarira kuziva zvakawanda nezve iyi nyowani yakaburitswa vhezheni, ivo vanogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Kuti utore chikamu mukuvandudzwa kweOpenSearch, hazvidi kuti usayine chibvumirano chekutamisa kodzero (CLA, Contributor License Agreement), uye mitemo yekushandisa chiratidzo cheOpenSearch inobvumidza uye inoita kuti utaure zita iri kana uchisimudzira zvigadzirwa zvako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » OpenSearch 1.0 inouya nerutsigiro rweARM64, kugadzirisa muwebhu interface uye nezvimwe